အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ ဝမ်းရေးကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်တဲ့ ပရဟိတမင်းသားကြီး ဦးကျော်သူ – Shwe Sar
ပရဟိတမင်းသားကြီးဦးကျော်သူကတော့ အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာလည်း နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးရဲ့ တာဝန်တွေကို မနားမနေထမ်းဆောင်နေသလို ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ဝမ်းရေးခက် ခဲနေကြမယ့် မိသားစုတွေအတွက် ဆန်တွေလှူဒါန်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဦးကျော်ထူးဆီက ဆန်အိတ်(၂၈) အိတ်ကို ကိုယ်ပိုင်ချွေးနှဲစာနဲ့မှာယူအားပေးခဲ့ပြီး ဆန်တစ်ပြည်အိတ်တွေ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆန်အိတ်တွေကိုတော့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၅) ရပ် ကွ က်အတွင်းမှာရှိကြတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားမိသားစု(၁၃၈) စု၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ(၆၀၀) ကျော် ကို လှူဒါန်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ.. အခုလိုလှူဒါန်းပေးတဲ့အပေါ်မှာ ပြည် သူ လူထုရဲ့ ဝမ်းသာအားရဆုတောင်းပေးသံတို့ကို ပြန်ကြားခဲ့ရလို့ ကြည်နူးဝမ်းသာမိတဲ့အကြောင်းလည်း ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။.
ပရဟိတမငျးသားကွီးဦးကြျောသူကတော့ အခုလိုကိုဗဈကာလမှာလညျး နာရေးကူညီမှုအသငျးကွီးရဲ့ တာဝနျတှကေို မနားမနထေမျးဆောငျနသေလို ဒီတဈခေါကျမှာလညျး ကိုဗဈကာလအတှငျး ဝမျးရေးခကျ ခဲနကွေမယျ့ မိသားစုတှအေတှကျ ဆနျတှလှေူဒါနျးပေးခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
ဦးကြျောထူးဆီက ဆနျအိတျ(၂၈) အိတျကို ကိုယျပိုငျခြှေးနှဲစာနဲ့မှာယူအားပေးခဲ့ပွီး ဆနျတဈပွညျအိတျတှေ ကိုယျတိုငျထုတျခဲ့ပါတယျ။ ဆနျအိတျတှကေိုတော့ မရမျးကုနျးမွို့နယျ၊ (၅) ရပျ ကှ ကျအတှငျးမှာရှိကွတဲ့ အခွခေံလူတနျးစားမိသားစု(၁၃၈) စု၊ စုစုပေါငျး လူဦးရေ(၆၀၀) ကြျော ကို လှူဒါနျးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ.. အခုလိုလှူဒါနျးပေးတဲ့အပျေါမှာ ပွညျ သူ လူထုရဲ့ ဝမျးသာအားရဆုတောငျးပေးသံတို့ကို ပွနျကွားခဲ့ရလို့ ကွညျနူးဝမျးသာမိတဲ့အကွောငျးလညျး ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။.
ဒါ့အပွငျ ဦးကြျောသူကတော့ လူသားတိုငျး ကနျြးမာခမျြးသာပွီးတော့ ကပျဘေးဒုက်ခမှ လှတျမွောကျကွစဖေို့လညျး ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့ခဲ့ပါတယျ။ လူတှရေဲ့နောကျဆုံးခရီး ဖွောငျ့ဖွူးဖို့ နာရေး အတှကျ အငျတိုကျအားတိုကျကူညီပေးနသေလို ရှငျရေးအတှကျလညျး ကိုယျပိုငျခြှေးနှဲစာထဲက ဆနျတှလှေူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ဦးကြျောသူရဲ့အလှူလေးကို သာဓုချေါပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။
Previous post မြူးဇစ် ဇုန်ကေတီဗီ ပိုင်ရှင် နဲ့ မန်နေဂျာ ကို အမှုဖွင့်လိုက်ပြီ
Next post သီချင်းတီးလုံးအတိုင်း ကိုယ်လုံးလေးကိုလှုပ်ခါကာ အမိုက်စားကနေတဲ့ သီရိရှင်းသန့်ရဲ့ ဗီဒီယို